Ama-blister emzimbeni: izimbangela nezindlela zokwelashwa. Kuthiwani uma izibhansela zivela emzimbeni?
Ama-blister emzimbeni: izimbangela nezindlela zokwelashwa
Kungani amabhuleki avela ezindebeni nakwezinye izingxenye zomzimba?
Ngeshwa, indoda yesimanje ingaphansi kwethonya lezici eziningi ezingathinteki isimo sakhe sempilo. Ngaphansi kwenani elikhulu lezifo ezihlukahlukene, amabhaktheriya hhayi bonke akwazi ukubhekana nokuzivikela. Ezinye zazo zisemzimbeni isikhathi eside futhi lo muntu akazizi ngabo, kanti abanye babonisa izimpawu ezimnandi kakhulu, isibonelo, amabhuleki abangela izinkinga eziningi.
Ungamnaki uphawu olunjalo, nakuba kungase kubonakale kungalimazi kuwe. Ngaphansi kwalo, noma yini ingafihlwa. Ake sibheke ukuthi yiziphi izibhansela nokuthi zingakuxwayisa ngani.
Yini ebangela izibhamu emzimbeni?
Ama-blister ayenamahloni ekuvumelaneni. Ziza ngobukhulu obuhlukahlukene, imibala kanye nezimo. Ezinye zazo zishaya futhi zithuthukisa. Phakathi kwezizathu ezivame ukubonakala kwazo:
Imiphumela emibi evela ekusebenziseni izidakamizwa
Ukuvezwa kwamakhemikhali esikhumbeni
Lona uhlu lwezinkinga ezingenacala kakhulu ezingasheshe ziphulukiswe futhi zisho okuhle ekubukeni okunjalo okungathandeki. Kodwa zikhona izifo futhi zibi kakhulu, isibonelo, urticaria, mycosis, dermatitis, dyshidrosis, herpes. Ukwelashwa kwabo kufanele kulandelwe odokotela abaqeqeshiwe futhi noma yikuphi umsebenzi we-amateur lapha ongathandeki. Futhi ama-blisters angabonakala njengesifo se-stomatitis. Kulesi simo banamhlophe noma bebala. I-Pharyngitis ibonakala ngamabhaltri e-pinki eludongeni lwe-pharyngeal, kodwa uma egcwele amhlophe, kungenzeka ukuthi ingumphimbo obuhlungu.
Uma izibhansa esikhumbeni zivela ngezikhathi ezithile, kuyinkimbinkimbi ngokukhethekile, ngoba kungaba uphawu lwesifo esibi kakhulu, isibonelo, i-eczema noma i-psoriasis. Ngakho-ke, ungalokothi unganaki lesi sibonakaliso.
Kuthiwani uma izilonda emzimbeni wami zichithwa?
Ngeshwa, ukubukeka okungathandeki kwamabhalane, akukhona konke. Ngokuvamile ziyingozi kakhulu, okwenza kube lula nakakhulu. Ngaphambi kokwenza noma yini, kufanele uthintane nodokotela ukuze akwazi ukuthola ukuhlolwa okuqondile. Kusukela kulokhu, uzobe enquma imithi engeke ikhulule kuphela ukususa, kodwa ngokuyinhloko ikwelapha isifo esimenza.
Ungalokothi ubheke amabhuleki, njengoba ungakwazi ukuphula ubuqotho bawo, futhi lokhu kusongela isifo esithathelwanayo.
Kumele uthintane nodokotela ngokuphuthumayo uma ama-blisters eba mkhulu kunezingamamitha amahlanu futhi ahambisana nokuxhaswa. Futhi, kufanele uxwayiswe uma zikhula futhi izinga lokushisa lakho likhuphuka.
Indlela yokwelapha izilonda emzimbeni?
Noma kunjalo, ukwelashwa kufanele ukhethe udokotela. Ungakwazi ukulandela kuphela izincomo eziyisisekelo ezizosiza ukuqeda le nkinga ngokushesha.
Ungalokothi uphonse le blister, futhi uma iqhuma yedwa, zama ukuyigcina isikhumba.
Gwema ukulimala komshini, ukungqubuzana nokucindezeleka.
Ungasebenzisi i-band-aid njenge-bandage.
Uma i-blister ibomvu, ungayigcoba nge-zinc noma i-ichthyol amafutha ngaphambi kokuvakashela udokotela.
Udokotela angakhipha inkambo yokwelapha, lapho uzosebenzisa amafutha akhethekile, ama-antibiotic noma imithi. Kodwa akunakwenzeka neze ukuqeda amabhuleki, njengoba kungenzeka ukuletha ukutheleleka kanye nokucindezela ngokujulile inqubo yokwelapha.
Yiba nempilo futhi usebenzise usizo olufanelekayo.
Izakhiwo kanye nokusetshenziswa kwamafutha e-fennel
Kuyini ukuphuza utshwala?
Yini engabangela ukulunga okungalungile komgqa womlomo
I-Horoscope ngo-Febhuwari 23: yini ekulindele ngosuku lomvikeli wezwe laseYise?
Abesifazane bezinwele zezinwele bob
Izitshalo zokugeza ezempilo, ubuhle kanye nenjabulo
Amakhukhi anebhokisi le-peanut ne-chocolate filling
"Isaladi" le "Easter wreath"
Ukubonakala komuntu webhizinisi
Yini engcono: ukuzizwa nokudumazeka noma ukuyeka imizwa?
Imiphumela emibi yokudla